असोज २५, काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्से सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आइतवार अन्तिम दिन रहेको छ ।
उक्त कम्पनीले असोज २१ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि रू.३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेको हो । कुल कित्तामध्ये १ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ । बाँकी २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर भने सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गरिएको हो ।
यो शेयरमा आवेदन दिनका लागि छिटोमा असोज २५ गते र ढिलोमा कात्तिक ६ गतेसम्मको मिति तय गरिएको भएपनि पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले छिटो अवधिभित्रै विक्री बन्द हुनेछ ।
यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । आईपीओ विक्रीका लागि असार १४ गते निवेदन दिएको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असोज ५ गते स्वीकृति पाएको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७० करोड रहेको छ । उक्त कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ ।
आईपीओ खरीद गर्न चाहनेहरुले विक्री प्रबन्धकसँगै सी–आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो शेयरको माध्यमबाट घरबाटै पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बीबी प्लस (आईएस) रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो रेटिङले कम्पनीको आधार औषतभन्दा राम्रो रहेको संकेत गर्दछ ।
उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव ६६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०६ दशमलव ३९ रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा गत शुक्रवारसम्ममा झण्डै साढे ७ लाख ५० हजार लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिइसकेका छन्।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ हितग्राही खातामा[२०७७ कार्तिक, १५]